ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူး ဘေဘီ – Grab Love Story
တနေ့ တက်စီ လေး ငှားပြီးတော့ အိမ်ကို ပြန်လာတယ်။ ကံများမကောင်းချင်တော့ ငှားလာတဲ့ ကားက လမ်းမှာ သူများကို သွားတိုက်မိတယ်။ တကယ်က ကျနော့ ကားဆရာကြီးက အမှန်ပါ။ လမ်းသွယ်ကနေ အတင်းထွက်လာတဲ့ ကားကို သွားတိုက်မိတာ။ ကျနော်လည်း ထားခဲ့ပြီး နောက်တစင်း ငှားရကောင်းနိုး ဆက်စောင့်ရကောင်းနိုး ဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ်။ တဘက်ကားကတော့ မမကြီးတစ်ယောက် ပဲ။ ကားဆရာ နဲ့ စကားပြောနေရင်းက အခြေအတင် ဖြစ်လာလို့ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာ ရင်းနှီးသလို ဖြစ်နေတယ်။ နည်းနည်း စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မှ ဆယ်တန်းတုန်းက စာသင်ပေးဖူးတဲ့ ဆရာမဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဆင်းပြီးတော့ ကူညီဖြေရှင်း။ အခြေအနေ ပြောင်းပြန် ဖြစ်သွားပြီး ကျနော်က ဆရာမ ဘက်က ဖြစ်သွားပြီး ကားဆရာကြီးကို ရန်လိုက်ဖြစ်။ စကားများ။ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာမ ကိုပဲ ဖျောင်းဖျ တက်စီဆရာကြီးလည်း လျော်ကြေးနည်းနည်းပါးရနဲ့ အဆင်ပြေသွားလေသတည်းပေါ့ဗျာ။
တက်စီ ဆရာကြီးက ကျနော့ကို ထားသွားတော့ ကျနော့မှာ ဒေါ်ကေသီမိုးကြီးနဲ့ ကျန်ခဲ့ရော။ တကယ်က ဆရာမ က ကျနော့ကို သေချာ မမှတ်မိလောက်ဘူး ထင်တာ။ နှစ်တွေလည်း ကြာပြီကိုး။ အဲဒီတုန်းက သူကလည်း အထက်တန်းပြ ဖြစ်ခါစ။ ကျနော်တို့ အတန်းကို အချိန်ပိုင်းဝင်သင်ရတာ။ ဒါပေမဲ့ တီချယ်ဒေါ်ကေသီမိုးက ကျနော့ကို နာမည် ပါမှတ်မိနေတယ်။ “ကျေးဇူးပဲ ဇော်ဖြိုးရယ် မင်းနဲ့ မို့လို့ မဟုတ်ရင် တီချယ် အ. . အ… ” ဆရာမ က ပြောရင်းနဲ့ မူးပြီး လဲကျသွားတာ သတိတော့ မလစ်သေးဘူး ကျနော်လည်း ဘာလုပ်ရမယ် မှန်း မသိဘူး။ လမ်းကလည်း လူ နည်းနည်းရှင်းတဲ့ လမ်းဖြစ်တဲ့အပြင် ညနက်စပြူလာပြီ မို့ ဘေးမှာ လူတွေ အများကြီး မရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံး ကျနော်လည်း ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားနေတော့ပဲ ဆရာမကို ကားနောက်ခန်းထဲ ထည့် ပြီးတော့ သူ့ကားကို တက်မောင်းပြီး နီးရာဆေးရုံကို မောင်းသွားလိုက်တယ်။ ဆရာမက နှလုံးရောဂါတွေ ဘာတွေ ရှိလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့လည်ပင်းခေါ်မလား ဇတ်ခေါ်မလား အဲဒီက အရိုးကျီးပေါင်း ကြောင့်မူးတာ။ အဲဒီကနေ မှ သတိမေ့သလို ဖြစ်သွားတာ တကယ်က မမေ့ဘူး။ ကျနော် သူ့ကားကို မောင်းလာရင်း အာရှတော်ဝင် ရှေ့ ရောက်ခါနီးမှာ သတိ ပြန်ရလာပြီး သူပြောပြလို့သိတာ။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဆရာမ ကို အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးတာပေါ့ဗျာ။
ကိုယ့်ဆရာကတော့ ထင်မှာပဲ ဒီဘဲ သေနတ်တွေ ထုတ်ပြနေပြီ ပစ်တော့မယ်လို့။ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ ကိုယ်ငယ်ငယ်က စာသင်ပေးဖူးတဲ့ ဆရာမ ပဲဟာ ဘယ်ပစ်မှားရဲ မှာလဲ။ ဟီးဟီး ဒါပေမဲ့ ဆရာမက အဆီတဝင်းဝင်း ဆိုတော့လည်း . . အင်း… ။ ကားမောင်းရင်းက ဆရာမဒေါ်ကေသီမိုး ကျနော့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဘာညာပြောပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ တီချယ်မိုးကြီးက စကားပြောတာ ကောင်းကောင်း မပြောဘဲ ကျနော့ လက်မောင်းကို ကိုင်ကိုင်ပြီး ပြောတာဗျ။ ကားလေးမောင်းရင်း စကားလေးပြောရင်းနဲ့ ပဲ တီချယ့်အိမ်ကို ရောက်သွားတယ်ပေါ့ ကိုယ့်ဆရာရယ်။ ကျနော် အိမ်ပေါ်ကိုလည်း လိုက်မတက်သလို တီချယ်ကလည်း ခေါ်ပါဘူး။ ဖုန်းနံပါတ်တွေ အချင်းချင်းလဲပြီးတော့ ကျနော် ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျနော်လည်း မောမောနဲ့ အိပ်လိုက်တာ တချိုးထဲအိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။
မနက်အိပ်ယာကမနိုးသေးဘူး ဖုံးမြည်လို့ ထကိုင်လိုက်တော့ တီချယ်မိုးဆီက ဖြစ်နေတယ်။ “ဟယ်လို” “သားရေ တီချယ်ပါ” “ဟုတ်ကဲ့” “သားကို တို့အကူအညီလေးတစ်ခုလောက် တောင်းချင်လို့” “ဟုတ်” “ဒီမနက်လည်း ခေါင်းက နည်းနည်း မူးနေလို့ကွယ် အိမ်မှာက ဘယ်သူမှလည်း မရှိဘူး တို့က တယောက်ထဲနေတာဆိုတော့လေ” “ဟုတ်” “အဲဒါ ဒီမနက်တော့ ဆေးခန်းလေး သွားပြလိုက်ချင်လို့ ကားလည်း မမောင်းရဲသေးလို့သားရယ် . . တက်စီ လည်း မစီးချင်ဘူး” “သြော် ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် တီချယ် ကျနော်ကားလာမောင်းပေးမယ်လေ” “အေးအေး ကျေးဇူးပါပဲသားရယ်” “တီချယ် မနက်စာရောစားပြီးပြီလား ကျနော် ဘာဝယ်ခဲ့ပေးရမလဲ” “ရတယ် မဝယ်လာနဲ့ သား တို့ လမ်းမှာ ပဲ ဝင်စားကြမယ်လေ” “ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့” စားရကံတော့ ကြုံပြီထင်တယ် ကိုယ့်ဆရာရေ… မနက်စာပြောပါတယ်.ဟီးဟီး။ အဲဒါနဲ့ပဲ ကျနော်လည်း အမြန်ဆုံးရေမိုးချိုးပြီး တီချယ်မိုးရဲ့ ကွန်ဒိုရှိရာကို အမြန်ဆုံးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။
ဟိုရောက်တော့ ကျနော် ဖုံးဆက်လိုက်တာနဲ့ တီချယ်မိုးက ဆင်းလာပြီး ကျနော့ကို ကားသော့လက်ထဲထိုးပေးတယ်။ တီချယ်မိုးက ကြက်သွေးရောင် ဇာအင်္ကျီရင်စေ့ လက်ပြတ်ကို အနက်ရောင် ထမီပြောင်နဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေတယ်။ အသက်ငါးဆယ်ကျော် ကျနော့တီချယ်က လေးဆယ်မပြည့်သေးတဲ့ အပျိုကြီးမမ ဆို မယုံမယ့်သူ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပြီး ကိုယ့်ဆရာကိုတောင် ပြလိုက်ချင်တယ်။ ထားပါတော့ ကျနော် သူ့ကားကို တက်မောင်းပြီး ထွက်လာလိုက်တယ်။ “တီချယ် . . မနက်စာ သွားစားမယ်မလား” “အေးလေ သား” “ဟုတ်” (ဘာလို့လဲ မသိဘူး ကျနော် ရင်တွေ တအားခုန်နေတယ် ဟီ) ကျနော်လည်း ဘယ်ကိုဘာရယ် ပြောမနေတော့ပဲ ဆရာစံလမ်းထဲက စိန်လျံကို မောင်းသွားလိုက်တယ်။ တီချယ်မိုးက မုန့်ဟင်းခါးစားတယ်။ ကျနော်က ပေါက်စီနဲ့ လဘက်ရည်။ (ဆိုင်ကရောင်းတဲ့ ကြက်သားပေါက်စီ ကိုဆိုလိုတာပါ ကိုယ့်ဆရာရယ်) စားပြီး သောက်ပြီးတော့ ပိုက်ဆံတွေ ဘာတွေ လုမရှင်းနေတော့ပဲ ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မမအေးဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်။
“ဟယ်လို . . ဟုတ်ကဲ့ မမအေး” “သြော် ကျနော် မအားဘူး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဆရာစံလမ်းမှာကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့” တီချယ်မိုးက ကျနော့ကို လှမ်းကြည့်တယ်။ ကျနော် သွားကလေးဖြဲပြီးတော့ပဲ ရယ်ပြလိုက်တယ်။ “ဟုတ် ဟုတ်… ပြီးမှ ကျနော် ဖုံးဆက်လိုက်မယ်” “ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တို့ မင်းသူငယ်ချင်း ဖြစ်သွားတာတုန်း သားရဲ့” “ကျနော့အစ်မပါ တီချယ်ရယ်… အစအဆုံး ရှင်းနေရမှာစိုးလို့ ဒီလိုပဲ ပြောလိုက်တာ .. သူက အရမ်းလေကြော ရှည်လို့” အမှန်ကတော့ ကျနော်တမင်ပြောလိုက်တာ။ ကိုယ့်ဆရာလည်း ဓာတ်တယ်မလား ဟဲဟဲ ကျနော်က သူ့ ရီအက်ရှင် ကို သိချင်လို့။ ထားပါတော့ ကျနော်တို့ အဲဒီကနေ တီချယ်မိုး ပြမယ့်ဆေးခန်းကို ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော် ဆေးခန်းကိုလည်း မလိုက်သွားပါဘူး ကားထဲမှာပဲ ကျန်နေခဲ့တာ။ သူမို့ ကျနော့ကို ကားနဲ့ ထားခဲ့တယ်။ သူ့သွားတုန်း မမအေးဆီ ဖုန်းပြန်ဆက်ပြီး အီစီကလီထုရသေးတယ်။ မမအေးက အိမ်လိုက်ပြမယ်ဆိုပြီး ခေါ်တာပါ။ ကျနော်က မမအေးပဲ အဆင်ပြေသလို ကြည့်ထား မမအေး သဘောကျမှပဲ ကျနော်နေမှာလို့ ပြောပစ်လိုက်တယ်။ မမအေး နဲ့ ဖုန်းပြောရင်း တန်းလန်း တီချယ်မိုးဆီက ၂ခါတောင် ဖုန်းဝင်လာသေးတယ်။
သူ့ကားကြီး ကျနော် မပြေးသွာမှာ စိုးလို့လားမသိလူး။ အဲဒါနဲ့ တီချယ်မိုးဆီဖုန်းပြန်ခေါ်ရသေးတယ်။ “ဟယ်လို” “မမပြော” “ဘယ်သူ့ဆီဖုန်းမှားခေါ်သလဲ မောင်ဇော် ဒါ တီချယ့်ဖုန်းကွ” “ဟာ . . ကန်တော့ ကန်တော့ တီချယ် ခုန အစ်မနဲ့ ဖုန်းပြောရင်းတန်းလန်းမို့ တီချယ့်ဆီ ဖုန်ပြန်ခေါ်တော့ ယောင်သွားတာ တီချယ် ပြောပါ” “သြော် သား… ဇော် စောင့်နေရတာ ပျင်းနေမှာစိုးလို့ နောက်နှစ်ယောက်ပြီးရင် တို့အလှည့်ရောက်ပြီလို့ ပြောတာ” “သြော် ရပါတယ် တီချယ်ရယ် ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ ကျနော် အေးအေးဆေးဆေး စောင့်မယ် ” “ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ ဒါပဲနော်” ခဏကြာပြီးတော့ တီချယ်မိုး ပြန်ရောက်လာတယ်။ ကျနော်က ကားရှေ့ခန်းတံခါးဖွင့်ပေးတော့ ကျနော့ ပခုံးကို ပွတ်ဆွဲသွားပြီးမှ ဝင်ထိုင်တယ်။ မတော်တဆလား တမင်တကာလားဆိုတာတော့ သူပဲသိမှာပဲ ကျနော်ကတော့ ရင်ထဲကို လူးခါသွားတာပဲ။ စိန်လျှံမှာ စားခဲ့တဲ့ ပေါက်စီ အကျိုးပေးပြီထင်ပါရဲ့ ကိုယ့်ဆရာရေ. . ကားမောင်းလာရင်းနဲ့ ခုနက ကျနော့ပခုံးတွေကို လာပြီးကျီစယ်သွားတဲ့ တီချယ်မိုးရဲ့ရင်သားတွေကို ခိုးကြည့်တော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေတောင် ဆူထွက်နေလိုလို။ အဲဒီလိုပြောတော့ ဆရာသမား မျက်မှောင် နည်းနည်းကျုံ့ သွားတယ်မလား၊ ကျနော့ စိတ်က ထင်တာသက်သက်လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ ကိုယ့်ဆရာရယ်၊ ရင်တွေခုန်နေလို့ အမြင်တွေပါ ဝေဝါးလာတာမျိုးပေါ့။ တီချယ်မိုးက ဖော့ခွက်ပါတဲ့ ဘယာဇီယာ ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ပိတ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကျောပြည့်ဘော်လီကို ဝတ်ထားတာပါ။ စလာကတည်းက ယဉ်တိုက်မှုဖြစ်မှာစိုးလို့ သတိထားပြီး မသိချင်ယောင် ဆောင်ခဲ့တဲ့ တီချယ်မိုးရဲ့ ရင်ညွန့်အစပ်မှာ ကျနော့မျက်လုံးတွေက ခဏခဏ သွားသွား ဆိုက်ကပ်နေပါတယ်။
သူ့ပစ္စည်း ကို ခိုးကြည့်နေရတော့ ကားပေါ်မရောက်ခင်ထဲက ခုန်နေတဲ့ ရင်ဘက်က မရပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဆရာဝန်ပြလာတာ ဘယ်လိုလဲ ဘာညာတောင် မမေးမိဘူး။ တီချယ်မိုးကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ ဖုန်းလေးပွတ်ရင်း လိုက်လာတာ။ ကျနော်လည်း အခုမှသတိရတာ သူဘယ်ဆက်သွားမယ် ဆိုတာ မမေးရသေးဘူး။ အရေးထဲ ဖုန်းဝင်လာလို့ ဘီးဇီးလုပ်လိုက်ရသးတယ်။ “တီချယ်… အိမ်ကိုပဲ မောင်ရမှာမလား” “မမ မဟုတ်တော့ဘူးလားကွ… .သားဇော် ဒီတခါ မယောင်တော့ဘူးပေါ့လေ” “ဗျာ . . မဟုတ်ပါဘူး တီချယ်ရယ်” “ဘာမဟုတ်တာလဲကွ” “သြော်… ကိုယ့်ဆရာမကို မမခေါ်စရာလား ဒါပေမဲ့ ဒီအတိုင်း တော့ ကြိုက်တဲ့လူလိုက်မေး တီချယ်က အသက်ငါးဆယ်ကျော်လို့ လုံးဝမထင်ရဘူး ကျနော်နဲ့ မောင်နှမဆို ယုံကြမှာပဲ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ တီချယ့်ကို တီချယ်လို့ပဲ ခေါ်မှာ” “တို့က ငါးဆယ်ကျော်တယ်ဆိုတာ စွန်းရုံကလေး စွန်းသေးတာပါ သားဇော်ရယ် ဟင်းဟင်း …” အခုချိန်မှာ ကျနော် ဘာစကားမှ ပြန်တုန့်ပြန်စရာမလိုဘူး ဆိုတာ ကိုယ့်ဆရာလည်း သဘောပေါက်တယ်မလား ကျနော်လည်း ကားကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး မောင်းနေလိုက်တယ်။ ကားကိုသာ မောင်းနေရတာ လူက လောင်တတီးတီး ဖြစ်နေပြီ။ မကြုံဖူးသေးတဲ့အတွေ့အကြုံ မို့လားမသိဘူး လောင်တီးတဲ့ ကိစ္စက တခြား ဘယ်အချိန်နဲ့မှ ကို မတူတာ။ ဘယ်လောက်တောင်လဲဆို အခုနေများ တီချယ်မိုးကြီးက ကျနော့ကောင်ရဲ့ ထိပ်ဖျားလေးကို လက်ညိုးရယ် လက်မလေးရယ်နဲ့ ဖွဖွလေး ဖိညှစ်လိုက်ရင်တောင် ကျနော် ပြီးသွားလောက်တယ်။
တီချယ်မိုးလည်း ဘာမှ ဆက်မပြောတော့သလို ကျနော် လည်း ဘာမှ ဆက်မပြောဖြစ်ပဲ သူ့အိမ်ပြန်တဲ့ လမ်းဘက်ကိုပဲ ဦးတည် မောင်းနေလိုက်တယ်။ “သြော် . . သားဇော်ရေ… မေ့နေလို့ တို့ကို —- ဈေးဝယ်စင်တာ လိုက်ပို့ပေးပါလား ဝယ်စရာလည်း နည်းနည်း ရှိလို့” “ဟုတ် ….. တီချယ်” ဆိုတော့ ကျနော်လည်း တီချယ် လိုရာခရီးကို ဦးတည်လိုက်တယ်ပေါ့ ဆရာသမားရယ်။ ကဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပေရှည်သလို ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ် ကိုယ့်ဆရာရေ… ကျနော်တို့ — ဈေးဝယ်စင်တာ ရောက်သွားတယ်.။ တီချယ်က သူလိုအပ်တာတွေဝယ်တယ်။ ပြီးပြန်လာ။ ကျနော်က အထုပ်ဆွဲပြီးလိုက်ပေါ့။ တီချယ်မိုး ကွန်တို ရောက်လို့ ကာပါကင်ထိုးပြီးတဲ့အခါ ကျနော်က ဘာမှ ပြောမနေတော့ပဲ ကားသော့တွဲကို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ပြီး သူဝယ်လာတဲ့ အထုပ်တွေ လက်က ဆွဲလို့ သူ့နောက်က လိုက်လာတယ်။ တီချယ်လည်း ဘာမှ မပြောဘူး။ အပေါ်ရောက် တော့ ကျနော့ကို ရေတစ်ခွက်ချတိုက်ပြီး အထဲဝင်သွားတယ်။ ကျနော့မှာ တယောက်ထဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ဒီအတိုင်း ထိုင်နေရတယ်။
တီချယ်မိုးက အထဲမှာ ဝယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ နေရာချနေလာ အဝတ်လဲနေလားတော့ ကျနော် မသိဘူး။ ခဏနေတော့ အထဲကလှမ်းပြောလေရဲ့ “သားဇော်ရေ . . ခဏလေးနော်” တဲ့ “ဟုတ်” လို့ပဲ ပြန်ပြီး အသံပေးလိုက်တယ်။ နည်းနည်းကြာသွားပြီးတော့ စက်နဲ့ နှပ်ထားတဲ့ ဘလက်ကော်ဖီနှစ်ခွက် ကိုင်ပြီး ထွက်လာတယ်။ သကြားထုပ်လေးတွေလည်း ပါတယ်။ “သား… ကော်ဖီသောက်ဦး” “ဟုတ် ” ကျနော် ကော်ဖီထဲကို သကြားထုပ်တစ်ထုပ် ဖောက်ထည့်ပြီးမှ “တီချယ်ကလည်း ကျနော့ကို နို့ထည့်မပေးဘူးလား” “ဟင်” “ကျနော်က ဘလက်ဆို သိပ်မသောက် တတ်လို့ပါ” “သြော် . . ဘာများလဲ လို့ ခဏလေး” ဆိုပြီး အထဲ ပြန်ဝင်သွားလေတယ်ကိုယ့်ဆရာရေ။ ကျနော်ကတော့ အနောက်ကနေကြည့်ပြီး သွားရေ တမြားမြား နဲ့ပေါ့။ ဟင်းးးးးးး မကြာပါဘူး တီချယ်မိုး ကော်ဖီမိတ် ဗူးလေး ကိုင်ပြီး ပြန်ရောက်လာတယ်။ ကျနော်လည်းကော်ဖီထဲကို ကော်ဖီမိတ်(နို့မှုန့်) ထည့်ပြီး ကော်ဖီလေး အချိန်ဆွဲသောက်ရင်း အကြံထုတ်နေလိုက်တယ်။
ကော်ဖီသောက်လို့ ပြီးတဲ့အခါ ပြန်လိုက်ရင်ကောင်းမလား အကြောင်းရှာပြီး နေရင်ကောင်းမလားပေါ့။ တီချယ်မိုးကတော့ ကျနော် ရှိနေတာတောင် သတိရသေးရလားမသိဘူး။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ချိတ်ပြီး ကော်ဖီကို အရသာခံသောက်နေတာ ကိုယ့်ဆရာရေ။ ကော်ဖီတဝက်လောက်ကုန်သွားတော့ သောက်တာခဏရပ်ထားပြီး အချိန်ဆွဲရသေးတယ်။ စိတ်ထဲမှာက လွန်ဆွဲနေတယ်။ သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏ ကလည်း ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ အခြေအနေက ကျနော့ဘက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ကိုယ့်ဆရာလည်း သိတယ်မလား။ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော် ကဒီလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျနော် လုံးဝ မကြိုးစားတော့ဘူး။ တီချယ့်ဘက်က စပြီး လမ်းဖောက်ပေးလာရင်တော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆက်လျှောက်သွယ်မယ်ပေါ့ဗျာ။
ဒါနဲ့ ပဲ သောက်လက်စ ကော်ဖီခွက်ကို တကျိုက်ထပ်မော့လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စကားတခုခုပြောမို့ ကြံနေတုန်းမှာပဲ “သြော် .. သားရေ မင်းက ဖုန်းဆရာ ဆိုတော့ အကူအညီတောင်းရဦးမယ် တို့ဖုန်းလေး တစ်လုံးကွယ် ပျက်နေတာလား မသ်ိဘူး အဲဒါ ကြည့်ပေးပါလား ကြာတော့ ကြာနေပြီ” “ဟုတ် ပြကြည့်လေ တီချယ်” ဆိုတော့ဖုန်းသွားယူလာပြီး ကျနော့ကိုပေးတယ်။ ကျနော် က အားသွင်းကြိုးပါတောင်းပြီးခဏ အားသွင်းထားလိုက်ပြီး လက်ကျန်ကော်ဖီကို အရင် ရှင်းလိုက်တယ်။ ပြီးမှ ဖုန်းကို ပါဝါ ဖွင့်ကြည့်တော့ (ဖုန်းဖမ်းဝဲလ်) ကျနေတယ် လို့ ကျနော် ယူဆလိုက်ပြီး “ရတယ် တီချယ် ကျနော် လုပ်ပေးမယ် ဖုန်းက (ဖုန်းဖမ်းဝဲလ်) ကျသွားတာ ကွန်ပြူ တာ တလုံးလုံး သုံးဖို့ရှိလား ကျနော် တခါထဲ (ဖုန်းဖမ်းဝဲလ်) ဆွဲပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်မယ်” ကျနော့ဆီ သူ (လက်တော့) ထုတ်ပြီး လာပေးတော့ ကျနော်လည်း လုပ်စရာရှိတာ စလုပ်တယ်ပေါ့။ ဖုန်းအတွက် လိုတာတွေ အင်တာနက်မှာ ရှာနေရင်းက “သားရေ တို့ အဝတ်သွားလဲလိုက်ဦးမယ်နော် လိုတာရှိရင် လှမ်းခေါ်လိုက်” ဆိုပြီး အထဲဝင်သွားတော့ ကျနော် တယောက်ထဲ လက်ပ်တော့ တလုံးနဲ့ ဧည့်ခန်းထဲ ကျန်နေခဲ့ရော။လိုချင်တဲ့ (ဖုန်းဖမ်းဝဲလ်) ကိုတွေ့တော့ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲထားရင် တီချယ့် ကွန်ပြူတာကို နည်းနည်း မွှေကြည့်ဖို့ စဉ်းစားမိသွားတယ်။ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး သူရော အောကားတွေ ဘာတွေ ကြည့်တတ်သလား ဆိုတာလောက်ပါပဲ။
ရှာတဲ့ နေရာမှာ စတားဒေါ့အမ်ပီဖိုး ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ ဗွီဒီယို ဖိုင်တွေ တန်းစီပြီး ကျလာပါလေရော ကိုယ့်ဆရာ ထင်တာမှန်ပါတယ်။ တီချယ့်ကွန်ပြူတာထဲက ဆင်းရဲသားကားတွေကို ကျနော် ရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားလေသည်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီထဲက ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို ကလစ်ထောက်ပြီး လမ်းကြောင်း ကြည့်လိုက်တော့ ဖိုင်လမ်းကြောင်း အဆင့်မှ အဆင့်ကို ခံထားတာဆရာရေ။ ဒီအတိုင်း လိုက်ရှာရင် တော်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ။ ကျနော် လည်း သူစဉ်းစားပြီး သေချာ သိမ်းထားပုံကို သဘောကျလို့ အသံထွက်ပြီး ဟီ ခနဲ ရယ်လိုက်မိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ “ဘာလို့ရယ်တာလဲကွ” ဆိုတဲ့ အသံက ဂါဝန်တထည်ဝတ်ပြီး ကျနော့နောက်က ထွက်လာပါလေရောဗျာ။ “ဗျာ .. တီချယ်… ဟို . . . ကျနော်လေ ..” “မင်း… ဒါတွေ ဘယ်လို ရှာတွေ့သွားတာလဲ” ဆိုပြီး ကျနော့လက်ထဲက မောက် ကို ဆွဲယူပြီး ဖွင့်လက်စတွေ အကုန်လုံး လိုက်ပိတ်တယ် ကိုယ့်ဆရာရေ…။ မျက်နှာက ဒေါသဖြစ်နေတာ မဟုတ်သလို ဘာဖြစ်နေလည်း ခန့်မှန်းလို့ မရဘူး။ ကျနော်လည်း ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ။ “ဘာကိစ္စ မဆိုင်တာတွေ လျှောက်ကြည့်တာလဲ သား တခြား ဘာတွေ လျှောက်ဖွင့်ထားသေးလဲ” “ဘာ . . ဘာမှ မဖွင့်ပါဘူး တီချယ် .. ဟို… ကျနော် ကျနော် ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲထားတဲ့ ဖိုင် တခုပျောက်သွားလို့ လိုက်ရှာရင်း တွေ့သွားလို့ ဖွင့်ကြည့်တာပါ” “အေး . .. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်းကို တို့ စိတ်ဆိုးတယ် တို့က ယုံကြည်လို့ ဒီကွန်ပြူတာကို မင်းလက်ထဲ ထားသွားတာ တော်ပြီ ဖုန်းလည်း ပြင်မနေနဲ့တော့ မင်း ပြန်ချင်ရင်ပြန်တော့ တို့ ဘာမှ ခိုင်းစရာ အကြောင်း မရှိတော့ဘူး တို့က စပ်စပ်စုစု လုပ်တဲ့လူဆိုရင် တအားမုန်းတာ” ကျနော် သူ့ကို မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပဲ ကြည့်နိုင်တော့တယ်။
မျက်လုံးကတော့ တော်တော်လေးဟိုက်နေတဲ့ ဂါဝန်ဆီကို အကြည့်ရောက်ဖြစ်အောင် ရောက်သွားသေးတယ်။ တီချယ့်ကို ကြည့်ရတာ အတွင်းမှာ ဘာမှ ခံဝတ်ထားပုံမပေါ်ဘူး။ အိမ်နေရင်း ဂါဝန် အသားပျော့ပျော့ပေါ်မှာ မသိမသာ ပေါ်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေတွေက ကျနော့အာခေါင်တွေ ခြောက်သွေ့စေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကရော လောလောဆယ်အခြေအနေကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ဖို့ ဘယ်လိုများ တတ်နိုင်မှာတဲ့တုန်း ကိုယ့်ဆရာရယ်။ ဘဝဆိုတာ အောစာအုပ်ထဲကလို ဖြစ်လာတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။ အခုနေ အတင်းလုံးလိုက်ရင် ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်း သဘောပေါက်ပါတယ်။ ကျနော့ သီဝရီ အရ မိန်းမတွေက နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ငြင်းနေတုန်းပဲ ကိုယ်က ရအောင် ချုပ်တတ်ဖို့ပဲ လိုတယ် ဆိုတာ ကလည်း အခုလိုအခြေအနေမှာ ကျနော်က ထုတ်မသုံးရဲဘူးလေ။ အနည်းဆုံးတော့ တချိန်က ကိုယ့်ဆရာမ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အသိက ရှိနေသေးတာကိုး။ နောက်ဆုံးတော့ လည်း စိတ်လျှော့ချလိုက်ပြီးမှ “ကျနော့ကို ခွင့်လွှတ်ပါတီချယ် .. ကျနော် မလုပ်သင့်တာ လုပ်လိုက်မိတာပါ၊ စည်းမစောင့်သလိုလည်း ဖြစ်သွားတယ် ကိုယ့်ဆရာမအပေါ် မကြံအပ် မစည်ရာကို ကြံစည်မိသလိုလည်း ဖြစ်သွားတယ် တောင်းပန်ပါတယ် တီချယ်ရယ်… ကျနော် သွားလိုက်ပါဦးမယ်” ကျနော် တမင်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေမှန်း ကိုယ့်ဆရာလည်း ရိပ်မိတယ်မလား မတတ်နိုင်ဘူး နောက်ဆုံးရတဲ့ အခွင့်အရေး လေးကို ရသလို သုံးပြီး တိုက်စစ်ဆင်ရတာပဲ ဟီ။ ပြိးတော့ ကျနော်လည်း ခေါင်း ငိုက်စိုက်ငိုက်စိုက်နဲ့ အိမ်တံခါး ဖွင့်ပြီး ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ဓါတ်လှေခါးတောင် မစောင့်ပဲ ဒီအတိုင်းဆင်းလာခဲ့ပြီး လမ်းမပေါ်ရောက်တော့ တက်စီတစင်း တားပြီး ပြန်လာခဲ့လိုက်ရော. . .။ ရပ်ကွက်ထဲပြန်ရောက်တော့ အနီးအနားက စတိုးဆိုင်မှာ ဘီယာ၂ဘူးဝယ်ပြီး အိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာ အိမ်ရောက်တော့မှ အဝတ်အစားလဲတော့ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက တီချယ်မိုးရဲ့ ကားသော့ကြီး ထွက်လာတယ်။
အဲတော့မှ တခါ သူ့ဆီ ဖုန်းဆက် ပြီးပြောရသေးတယ်။ တမင်ယူသွားတာ မဟုတ်ကြောင်း အထပ်ထပ်တောင်းပန်ရတာပေါ့ ကိုယ့်ဆရာရယ်။ အောင်မာ စိတ်ဆိုးပြေသွားပြီလား ဘာလားတော့ မသိဘူး ရယ်ရယ်မောနဲ့ပဲ မြန်မြန်ပြန်လာပေးတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျလေည်း ချက်ချင်း အဝတ်ပြန်လဲပြီး သူ့ဆီ ထွက်သွားရတယ်။ တံခါးဘဲလ်တီးလိုက်တော့ တီချယ် မိုး လာဖွင့်တယ်။ ခုနက ပုံစံအတိုင်းပဲ အောက်မှာ အခုအခံ မပါတဲ့ ဂါဝန် ကြီးနဲ့ပဲ။ “သားဇော်ရယ် . . မင်းကလည်း ချက်ချင်းကြီး ထွက်ပြေးသွားတာကိုး .. အခု အိမ်ရောက်ပြီးမှ ပြန်လာတာလား” “ဟုတ်” “သြော်… တို့က လမ်းမှာပဲ အောက်မေ့လို့ ပြန်လာခဲ့လို့ ပြောလိုက်တာ အိမ်ပြန်ရောက်သွား ပြီဆိုလည်း အေးအေး ဆေးဆေးမှ ပြန်လာရောပေါ့ သားရယ်” “ဟုတ် ကျနော်က တီချယ် တမျိုး ထင်မှာစိုးလို့ပါ” “မထင်ပါဘူးကွာ .. ခုနက လည်း တို့က ရှက်သွားလို့ပါ၊ လူကြီးဆိုတော့ ရှက်တာပေါ့ ပြီးတော့ ငါ့သားလည်း တို့ကို အထင်သေးသွားမှာ စိုးလို့” “ဘာလို့သေးရမှာလဲ တီချယ်ရယ် . . ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စလည်း မဟုတ် အထင်သေးရမဲ့ ကိစ္စလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့” “မထူးဆန်းရင်လဲ ဘာလို့ဖွင့်ကြည့်ရသေးတုန်း ခွေးကောင်လေးရဲ့” “ဟီးဟီး… အဲဒါက ကျနော်ဝါသနာပါတာကိုး တီချယ်ရဲ့” ကျနော့ကို မျက်စောင်းထိုးတယ် ဆရာသမားရေ… အခြေအနေကတော့ ဟန်ပြီနဲ့တူတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်မတွေရဲ့ မျက်စောင်းဟာ ယောက်ျားတွေကို အရည်ပျော်စေဖို့ အထူးတလည် ဖန်တီးနေစရာမလိုလောက်ဖူးလို့ ထင်တယ်ကိုယ့်ဆရာရေ။ ကျနော့မှာ အလိုလိုနေရင်း မောလျလာတယ်။
“ကဲကဲ ခုန ကော်ဖီသောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ အအေးဖြစ်ဖြစ် သောက်ပေါ့ဟုတ်လား” “တော်ပါပြီတီချယ် ကျနော့ကို ရေပဲ ပေးပါ.” “အိုခေ” ရေတခွက် သွားယူလာပြီး ကျနော့ကိုတိုက်တယ်။ “ကဲ .. ဆရာလေး အမောဖြေပြီးသွားရင် ဖုန်းလေး ဆက်ပြင်လိုက်ဦး ဟုတ်လား ခုန မင်းဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားတာ ပြီးပြီနဲ့ တူတယ်” “ဟုတ်ဟုတ်” ဒီလို ကိုယ့်ဆရာရဲ့ တီချယ်မိုးရဲ့ ကွန်တို ဧည့်ခန်းမှာ ဆိုဖာဆက်တီ တစ်စုံ နဲ့ အလယ်မှာ မှန်စားပွဲ တစ်ခု ရှိတယ်။ ပထမ ကျနော်က အိမ်အတွင်းထဲကို ကျောပေးထားတဲ့ ခုံမှာ ထိုင်နေတာ။ အခုက သူက ကျနော် ခုန ထိုင်နေတဲ့ နေရာမှာ ထိုင် နေပြီးတော့ ကျနော်က လောလောဆယ် တီချယ်မိုး နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က နှစ်ယောက်ထိုင် ခုံမှာ ထိုင်နေတာပါ။ တီချယ်မိုးက သူ့ဘက်လှည့်ပြီးချထားတဲ့ လပ်တော့ ကို ကျနော့ဘက်လှည့်ပေးတယ်။ ကျနော်လည်းခုန ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေလိုက်ရှာဖို့ကွန်ပြူတာဆီ မျက်နှာမူလိုက်တယ်။ တီချယ်ကတော့ ဘယ်မှမသွားတော့ပဲနဲ့ အရှေ့မှာ ပဲ ထိုင်နေတော့တာ ကိုယ့်ဆရာ။ စိတ်ထဲမှာ မကြာခင်တခုခု ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာ ကြိုသိနေပေမဲ့ ဘယ်ကဘယ်လိုစရမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတာ။ ကွန်ပြူတာမှာ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ ။ ဟုတ်ပါတယ် ကိုယ့်ဆရာမှန်းထားသလိုပါပဲ ကျနော်သွားနေတုန်း တီချယ်မိုးကြီး ကြည့်နေပုံရတဲ့ ဆင်းရဲသားကား တစ်ခုပါပဲ။ ကျနော် ပြုံးစေ့စေ့ မျက်နှာလုပ်ပြီး တီချယ့်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ တီချယ်က ကျနော့ ဘက်ကို ထလာတယ်။ ဘေးတော့ ကျနော့ဘေး ကို စွေ့ခနဲ့ ဝင်ထိုင်တာ ကိုယ့်ဆရာရေ .. ကျနော် ရင်ထဲ တဒုတ်ဒုတ်ခုန်လာသလို အငယ်ကောင်ရဲ့ ထိပ်က သွေးတွေကလည်း တဒိတ်တဒိတ် တိုးနေတယ်။
ကျနော် အသိလွတ်သွားသလို ဖြစ်သွားပေမဲ့ ကျနော့လက်မောင်းကို တီချယ့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေတဲ့ ပွတ်တိုက်မိသွားတယ် ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိနေရပါတယ်။ ကျနော် တီချယ့်ကို ဆွဲဖက်လိုက်တယ် “ကျနော့ကို ခွင့်လွတ်ပါတီချယ်… ဘယ်လိုမှ စိတ်ထိန်းလို့ မရတော့လို့ပါ” ကျနော်က ခပ်တိုးတိုးပြောလိုက်တော့ တီချယ်က ကျနော့နားကို ကပ်ပြီးတော့ “တို့လည်း ဟန်မဆောင်တော့ပါဘူး ဘေဘီရယ်” နားရွက်နားကို နှုပ်ခမ်းလေးနဲ့ မထိတထိလုပ်ပြီး ပြောတာဗျား ကျနော်လည်း တီချယ့်ဂါဝန်တွေ ကိုတောင် မလှန်နိုင်တော့ပဲ ဂါဝန်ပေါ်မှာ ဖုထနေတဲ့ တီချယ့်လုံးဝန်းပြီးတော့ ဝင်းအယ်နေတဲ့ နို့တွေကို ငုံစုပ်လိုက်တယ်။ နောက်ထပ် နို့တဘက်ကိုတော့ ကျနော့လက်တွေနဲ့ အငမ်းမရ ဆုပ်နယ်ပစ်တာပေါ့။ နောက်ဆုံး ကျနောမနေနိုင်လို့ တီချယ့် ဂါဝတ်ကို သွားနဲ့ ကိုက်ပြီး ဆွဲဖြဲပစ်လိုက်တယ်။ “ဗြိ” “အို” ဂါဝန်ပြဲတဲ့ အသံနဲ့ တီချယ့် အာမေတိတ်သံ အဆုံးမှာ ဖြူရှင်းဝင်းဝါတဲ့ တီချယ့် ရတနာ ရင်သား တွေကို ကျနော့ မျက်လုံးနဲ့ မြင်လိုက်ရတာပါပဲ ကိုယ့်ဆရာရေ။ ညိုဝန်းနေတဲ့ တီချယ့်နိုးသီးခေါင်းလေးတွေဟာ ကျနော့ရဲ့ နှုပ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ထိကပ်ထားရလိမ့်မယ် ဆိုတာ ဟိုးအရင် သူ့တပည့်ဘဝတုန်းက စိတ်ကူးတောင် မယဉ်ဖူးခဲ့တာပါ။ သူ့နို့သီးခေါင်းဘေးတဝိုက်မှာ ကျနော့ လျှာထိပ်ဖျားလေးနဲ့ ကကြီးခခွေးတွေ ရေးတော့ ကျနော့ဆံပင်တွေကို ဆောင့်ဆွဲတာဗျ။
ဆရာသမား ကြုံဖူးလားတော့မသိဘူး။ သူဆောင့်ဆွဲတာ နာပေမဲ့ ကျနော်က နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို မခံစားရပဲ သူ့နို့တွေကို ပိုပိုပြီးတော့ပဲ စို့ချင်လာတယ်။ တီချယ်မိုးရဲ့ နို့တွေကို ဘယ်ပြန်ဘာပြန် စို့နေရင်းက ပေါင်ကြားထဲကို စမ်းကြည့်လိုက်တွေ့ အရည်တွေကို စိုပြီးရွှဲနေပြီ။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း အောက်ကို အလှည့်မပေးတော့ပဲ တန်းပြီးလုပ်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျနော် က ဘောင်းဘီတွေ ချွတ်နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ် တီချယ်မိုးက ကျနော့ကောင်ကြီးကို သူ့လက်နဲ့ ဖမ်းဆွဲပြီးတော့ အား ငုံစုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ အား ကျနော့မှာ ဆွေမျိုးကို မေ့ရောကိုယ့်ဆရာရယ်။ သူစုပ်ပေးတာကောင်းလွန်းတော့ ကျနော့မှာ အားလုံးကို သတိလက်လွတ်ပါပဲ။ သူ့ကိုလည်း မညှာနိုင်တော့ပဲ ပါးစပ်ထဲကို ဆောင့်ဆောင့်ပြီး ထိုးထည့်မိတယ်။ ကျနော် ထိုးထည့်တဲ့အချိန် ပြန်ထုတ်တဲ့အချိန် ကြားမှာ သူ အသက်ရှူတဲ့ အချိန်တွေက အားလုံး ကွက်တိပါပဲ။ တီချယ်မိုးကို ကျနော် ဒီတချက်နဲ့တင် တော်တော်ဂါသွားတာ ကိုယ့်ဆရာရယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလင်း ပြောရရင် အခုလို ပါးစပ်ကို တခါမှမှ အားရပါးရ မလိုးဖူးဘူး။ ကျနော်က ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း “အွန်း . . အွန်း” ဆိုပြီး တီချယ့်ရယ့်အော်သံက စိတ်ကို တော်တော်တက်ကြွစေတယ်။
“ဘေဘီ တို့ကို ချစ်ပေးတော့” ပြောပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း လှဲချလိုက်တဲ့တီချယ်မိုးရဲ့ စကားတခွန်းမှာ ကျနော်က စက်ရုပ်လိုပဲ သူ့ပေါင်ကြားထဲ ဒူးထောက်ဝင်ထိုင်ပြီး အားရပါးရ ထိုးထည့်လိုက်တော့တယ်။ တီချယ်မိုးအိမ်မှာ ကျနော် တညလုံး နေဖြစ်သွားတယ်။ မနက် မိုးလင်း အိပ်ယာထတော့ တီချယ်မိုးက မနိုးသေးဘူး။ ကပိုကရို အိပ်နေတဲ့ တီချယ်မိုးရဲ့ နှဖူးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တော့ နိုးလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့ကို သာသာကြည်ကြည်ရှိပုံမပြဘူး။ ကျနော့ နေရာမှာ ဆိုရင်ရော ကိုယ့်ဆရာဘယ်လိုနေမလဲ။ ကျနော်ကတော့ တင်းသွားတယ်။ ဘာမှ ပြောမနေတော့ပဲ မျက်နှာသစ် ပလုပ်ကျင်း ပြီးတော့ အိမ်သာတက်တယ်။ သူ ဘာသူ စကားပြောချင်ပြော မပြောချင်နေပေါ့။ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ရုံရှိတာပဲ။ အိမ်သာထဲက ထွက်လာတော့ တီချယ်မိုး အဝတ်တွေဘာတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ် လဲဝတ်ထားတာတွေ့တယ်ဗျ။
တီရှပ်အသစ်ထည်နဲ့ ထမီအနက်ရောက်ပြောင်ကို ဝတ်လို့။ လက်ထဲ လည်း စာအိပ် တလုံး။ အထဲမှာ ပိုက်ဆံတွေ ရှိပုံရပါတယ်ကိုယ့်ဆရာရယ်။ ဆော်ကြီး ဘာဇယားတွေ ခင်းဖို့ကြံလည်းတော့ မသိဘူး။ သူ ကျနော့ကို ရယ်ပြတယ်။ ပြီးတော အနားကပ်လာပြီး ကျနော့ပါးကိုလက်တဘက်နဲ့ ပွတ်တယ်။ “မနေ့က တို့အရမ်း ပျော်တယ် သိလား မင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်” သူက ကျနော့ကို လေ သံ လေးနဲ့ပဲပြောတာပါ။ ကျနော် သူ့ကို ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေလိုက်တယ်။ “ဒါပေမဲ့ တို့ နှစ်ယောက်က ရေရှည်ကြီး တော့ မသင့်တော်ဘူးမလား အဲဒါကြောင့် နောက်ဆို လမ်းမှာတွေ့ရင်တောင် မခေါ်နဲ့တော့နော်၊ တို့တွေ ဘယ်တုန်းကမှ မသိခဲ့ကြသလိုပေါ့ ဟုတ်လား ဆရာတပည့် ဆိုတာကတော့ နဂိုထဲက စိတ်ထဲမှာ မရှိဘူး မလား ဘယ်လိုမှ တော့ သဘောမထားနဲ့ကွာ ဒါလေး ယူသွား” သူပေးတဲ့ စာအိတ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်တန်တွေရှိမှန်း မသိဘူး။ ကျနော် နှုတ်ခမ်းကို တချက်တွန့်လိုက်တယ် ကိုယ့်ဆရာရယ် မင်းသားလိုလို ဘာလိုလိုပေါ့ ပြီးမှ သူ့စာအိတ်ကို ဖတ်ခနဲ ဆွဲယူပြီး အနားမှာရှိတဲ့ စားပွဲပေါ်တင်လိုက်တယ်။
“အရာရာအားလုံးတီချယ့်သဘောပါပဲ” ပြောပြီး သူ့ကိုကျနော် ဆွဲဖက်လိုက်တယ်။ တီချယ်မိုး မျှော်လင့်ထားပုံမပေါ်ဘူး။ ပြီးမှ သူ့တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးပြီး “တပည့် အမိုက်ကလေးကို တခါလောက် ထပ်ပြီး ခွင့်လွတ်ဦးနော် တီချယ်” ပြောပြီး သူ့အင်္ကျီအောက်က ဘရာဇီယာကို ကျနော် ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ အင်္ကျီကို ဆွဲမပြီး နို့တွေကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့တော့တာ။ ကျနော့ကို ဘာမှကို ပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူး နှစ်မိနစ်လောက်စို့ပြီးတော့ သူ့ကို ခုံပေါ်တင်ပြီးမှ ထမီကို ဆွဲချွတ်ပြီး ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းဝင်ပြီး အစေ့ထိပ်ကလေးကို ဆွဲစုပ်ပြစ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ လျှာကို အတွင်းနံရံတွေ တလျှောက် ကစားပြီး အားရပါးရ ဂျာပစ်လိုက်တယ် ကိုယ့်ဆရာရယ်။ သူ့ကို ဂျာလို့ အားရပြီးတော့မှ ကျနော့ ဘောင်းဘီကို မချွတ်ပဲ ပစ္စည်းထုတ်ပြီး တီချယ့် ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
သြော် ကိုယ်ဆရာကလည်း မစုပ်ပဲ နေမလား စုတ်တာပေါ့။ စုပ်တာမှ အားရပါးရကိုစုပ်တာ။ ကျနော်လည်း တော်တော် ခံလို့ကောင်းကောင်းနဲ့ ကော့ကော့ကော့ထိုးပေးနေလိုက်တယ်။ နည်းနည်း ကြာသွားပြီးမှ တီချယ်မိုးကြီးကို မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းပြီး နှုပ်ခမ်းတွေကို စုပ်နမ်းရင်း လက်တဘက်နဲ့ ပေါင်ကြားထဲကို ကလိပေးနေလိုက်တယ်။ တီချယ်မိုးကြီးဆိုတာဗျာ… အရည်တွေကို ရွှဲနစ်နေတာပဲ။ အခုထိတော့ ကျနော့ကို ဘာစကားမှ ပြန်မပြောဘူး။ အဲဒါနဲ့ပဲ နမ်းနေတာကို ရပ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို လက်နဲ့ ဆွဲလှည့်ပြီး ခုံပေါ်ပို ကုန်းသလိုဖြစ်အောင်ထားလိုက်ပြီး အနောက်က နေ တေ့ပြီး ဆော်ပစ်တယ် ကိုယ့်ဆရာရယ်။ အားပါးပါး ညက လုပ်တာတွေထပ်တောင် ပိုကောင်းနေသလိုပဲ။ တစ်မိနစ်ခွဲ နှစ်မိနစ်လောက် လုပ်ပြီးတော့ ကျနော် ရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထား ဖြစ်အောင် ပြန်နေလိုက်ပြီးမှ နှဖူးကို တချက်နမ်းလိုက်တယ်။ “တီချယ် . . ကျနော် ပိုင်းလုံး မဟုတ်ဘူး ကျနော့ကို အဲလို လာလုပ်လို့မရဘူးသိလား အဲဒီပိုက်ဆံတွေလည်း ယူဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး၊ နောက်လည်း လမ်းတွေ့ရင် ခေါ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့နော် ကျနော် တို့ ဇာတ်လမ်း ဒီမှာပြတ်ပြီ” ပြီးတော့ ကျနော်လည်း အဲဒီကနေ ထွက်လာခဲ့တယ် ကိုယ့်ဆရာရယ်။ ကျနော် ဘဝမှာ ဆော်တွေ အများကြီးနဲ့ ကြုံဖူးပါတယ်။ တခါမှ ဒီလို ဆက်ဆံတာမျိုး မခံဖူးပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ တော်တော် တင်းသွားလို့ ကျနော် ပြန်တုန့်ပြန်တာ လမ်းလွဲကောင်းလဲ လွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ နောက်ကိုတော့ ကျနော် ဆင်ခြင်မှ ဖြစ်မယ်လို့တော့ စိတ်ထဲက တွေးဖြစ်ပါတော့တယ်…။ ပြီးပါပြီ.ခရပ်ဒစ်..